गोरखाको मनकामना केबलकार २४ वर्षमा प्रवेश - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाको मनकामना केबलकार २४ वर्षमा प्रवेश
मनकामना क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । केबलकारको टप स्टेशनसँगै करिब ९ रोपनी क्षेत्रफलमा ४० कोठाको सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट निर्माण गरिन लागेको कम्पनीले बताएको छ । रिसोर्टको निर्माण कम्पनीको भातृ संस्था रिसोर्ट बाइ मनकामना केबलकार प्राइभेट लिमिटेडले गर्नेछ । रिसोर्ट निर्माणको थालनी आगामी फागुनदेखि हुने र करिब डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले बताएको छ । रिसोर्टमा रेष्टुरेन्टका साथै १०० सिट क्षमताको कन्फरेन्स हल समेत रहने छ ।